Sicirka shidaalka oo laga yaabo inuu gaaro $120 fuustadii bisha November… – Hagaag.com
Sicirka shidaalka oo laga yaabo inuu gaaro $120 fuustadii bisha November…
Posted on 8 Luulyo 2018 by Admin in Dhaqaalaha // 0 Comments
Bangiga Merrill Lynch ayaa ka digay in sicirka shidaalka oo laga yaabo in uu gaaro $ 120 doollar barmiilkii, haddii cunaqabateynta Maraykanka uu saaray saliida Iran ay bilaabato bisha November ee soo socota.
Bangiga ayaa sheegay in ay adagtahay in la xaliyo joojinta kuli ee dhoofinta saliidda Iran.
Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa waydiistay Sacuudi Carabiya inay ku kordhiso wax soo saarkeeda 2 milyan oo fuusto maalin walba si loogu magdhabo caqabadaha ka iman kara cunaqabateynta Maraykanka ee Iran.
Dhinaca kale Iran ayaa waxa ay ku hanjabtay in ay joojinayso dhoofinta saliidda ee marta Xuddunta Istaraatiijiga ah ee Hormuz si wax looga qabto dadaalka Maraykanka ee lagu joojinayo iibinta saliidda Iran.
Suuqyada tamarta caalamiga ah ayaa lagu arkay isbeddello isbuucii la soo dhaafay sababtoo ah kor u qaadista cadaadiska Maraykanka ee dhinaca shidaalka ee Iran.